ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ | .
Incoterm: ကျေးဇူးပြု. ရွေးပါ EXW FOB အခြား
ငွေပေးချေမှုရမည့်: ကျေးဇူးပြု. ရွေးပါ T/T in advance အခြား